Iwe Unoziva iyo yeCognos Kusimudzira Yakanakisa Maitiro? - Motio
by MotioOct 14, 2021Cognos Analytics, Ndiwedzere Factory, Upgrades, Kuvandudza Cognos0 mashoko
Kwemakore Motio, Inc. yakagadzira "Maitiro Akanaka" akakomberedza kusimudzira kweCognos. Isu takagadzira izvi nekuitisa pamusoro pe500 implementations uye kuteerera kune izvo vatengi vedu vaifanira kutaura. Kana iwe uri mumwe wevanopfuura mazana matanhatu vanhu vakapinda mune imwe yeCognos Upgrade Workshops iwe hauna kungonzwa uchapupu kumatanho ekutanga-ruoko, asi iwe zvakare wakave nemukana wekushanda kuburikidza nemaekisesaizi mune edu maoko-pane nharaunda.
Tatsanangura matanho ari pasi apa semutsidziro kune avo vapinda musangano wedu, kana kunyange kune avo vanoda kuziva kubva kunyanzvi dzeCognos Analytics chaizvo zvekuita kuti vakwidziridze.
Tichange tichibata mamwe maCognos Upgrade Workshops muna 2022, saka tarisa peji redu rezviitiko munguva pfupi iri kutevera kune ese ruzivo uye nguva yekunyoresa.
Kana iwe usingade kuita iyo yekuvandudza iwe wega, tarisa yedu Ndiwedzere Factory kwatinoitira basa racho, kuti ugone kutarisa kune ako analytics!
Isu takanyora Cognos yekukwiridzira bhurogu ine rumwe ruzivo rwunonyatsotsanangura tsika dzakanakisa. Unogona kuverenga izvozvo nekudzvanya kubatana uku.